Ciidanka Qaramada Midioobay ee kasoo jeeda Tigray oo diiday inay dib u laabtaan - Haldoornews | Haldoornews
Ciidanka Qaramada Midioobay ee kasoo jeeda Tigray oo diiday inay dib u laabtaan
Ilaa 15 askari oo ka mid ah ciidamada Itoobiya ugu jira howlgalka nabad ilaalinta Qaramada Midoobay ee ku sugan Suudaanta Koonfureed, oo asal ahaan kasoo jeeda gobolka Tigray, ayaa Isniintii diiday in ay dib ugu laabtaan waddankooda, sida ay sheegtay Wakaaladda Wararka AFP oo soo xiganeysay afhayeenka Qaramada Midoobay, Stéphane Dujarric.
Guuto ka kooban 169 askari oo reer Itoobiya ah ayuu qorshaha yahay in laga baddalo ciidanka nabad ilaalinta, lagana saaro Suudaanta Koonfureed. Askarta ayaa si wareegto ah loo baddalaa muddo kaddib.
“Waxaan isku dayeynaa inaan helno xogta faahfaahinta ah, laakiin waxaan ogahay in qiyaastii 15 askari oo ka mid ah guutada ay diideen in ay diyaaradda ka raacaan garoonka Juba… Waxay codsadeen in ay joogaan,” ayuu yidhi Dujarric oo shir jaraa’id qabtay.
Dagaal ayaa gobolka Tigray ka qarxay horaantii bishii November ee sanadkii 2020-kii kaddib markii xoogagga xisbiga TPLF ay gacanta ku dhigeen saldhigyo militari oo ay gobolkaas ku leeyihiin ciidamada federaalka Itoobiya, waxayna arrintaas daba socotay khilaafkii soo kala dhex galay iyaga iyo dowladda uu hoggaamiyo Ra;iisul Wasaare Abiy Axmed.
Kumannaan qof ayaa lagu soo warramay in lagu dilay qalalaasahaas, halka qiyaastii labo milyan oo ruuxna ay ku barakaceen